लाेभले लाभ, लाभले विलाप भन्ने भनाइमा आधारित, सुनकाे अण्डा दिने हासकाे प्रेरणादायीक कथा - ज्ञानविज्ञान
लाेभले लाभ, लाभले विलाप भन्ने भनाइनै छ नि । मानिस जब लाेभ गर्न थाल्छ तब उसलाइ जति भए पनि पुग्न छाेड्छ । र, एकदिन लाेभ गर्दा गर्दै मरेर जान्छ तब उसले पाउने भनेकाे कात्राे मात्रै हाे । त्यसैले हामीले लाेभ गर्नु हुदैन । अाज हामीले यहाँ लाेभ गर्दा कसरी सर्वनाश हुन्छ भन्ने एक सुनकाे अण्डा दिने हासकाे प्रेरणादायीक कथा युट्युब च्यानल SAKARATMAK SOCH बाट साभार गरेका छाै । भिडियाे हेर्नुहाेस ः
ऊर्जाशील हुनुको एउटै उत्तम उपाय खुसी हुनु हो। खुसी मानिस निकै ऊर्जाशील हुन्छन् र जिन्दगीमा धेरै सफलतासमेत हात पार्छन्। नि:सन्देह हामी सबै खुसी हुन चाहन्छौँ। तर खुसी कसरी रहने त?
Don't Miss it खुट्टाको कुर्कुच्चा फुटेको छ ? यसो गर्नुस्
Up Next लामखुट्टेले सतायो ? यसरी भगाउनुहोस्